: at 1/24/2010 09:18:00 AM
မိုးခါး said... | Sunday, January 24, 2010 3:19:00 PM
ကလေးလေးကတော့ ပါရမီလည်း မနည်း ၀ါသနာလည်း မသေးပါ့လား ..:D
(အလုပ်ရှုပ်နေလို့ အိုနီးရေ .. စာတွေ တော့ လာလာဖတ်ပါတယ် .. :D)
Anonymous said... | Sunday, January 24, 2010 6:00:00 PM
ဟိဟိ သူ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့မလိုက်အောင် ကတတ်သဗျ.. တော်တယ်နော်။ တူအောင်လည်း ကနိုင်တယ်။း)
ဝက်ဝံလေး said... | Sunday, January 24, 2010 6:00:00 PM
ဟားဟားးးးးးးးး ကလေးက ချစ်ချာလေး သမီးလိုပဲလား ဟိဟိ
thawzin said... | Sunday, January 24, 2010 6:21:00 PM
အဲဒီသီချင်း တော်တော် နာမည်ကြီးတယ်နော်။ ကောင်မလေးတွေကတာ ပိုကြည့်လို့ကောင်းတာပါ။ ကလေးမလေးလဲ တော်တော်တူအောင်ကတတ်တာပဲဗျနော်။ ကိုးရီးယားခေတ်လေ။
လသာည said... | Sunday, January 24, 2010 6:25:00 PM
ဆိုနေတာလေးက ရယ်စရာ ချစ်စရာလေး..။
ahphyulay said... | Sunday, January 24, 2010 6:54:00 PM
ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာ ပို့ (စ)လေးပါဗျို့ ။
~ဏီလင်းညို~ said... | Sunday, January 24, 2010 8:16:00 PM
အံမယ်...သူဂ သီချင်းကိုတောင် မာန်ကလေးတက်ပြီး ပါးစပ်လေးဟဟ လိုက်ဆိုသေးသဗျ...ဟီးးးး
~ဏီလင်းညို~ said... | Sunday, January 24, 2010 8:18:00 PM
မေ့လို့ ဂိုရီးရားလို မနှုတ်ဆက်ခဲ့ရသေးဘူး....
Anonymous said... | Sunday, January 24, 2010 8:23:00 PM
အဟိဟိ... တချိန်မှာ နာမည်ကြီးလာမဲ့ မာမီလေးပေါ့နော်..။
Anonymous said... | Sunday, January 24, 2010 9:31:00 PM
ဧပရယ်လ်ပူး@ပူးတေ said... | Sunday, January 24, 2010 9:58:00 PM
ကလေးမလေးကတာကို ၃ ခါတိတိ ကြည့်မိတယ်။ အနားရှိရင် ဒီကလေးလေးတွေ မလွယ်ဘူး။ အသည်းယားလို့။ :D အတတ်ကလေးနော်။ တခုမှမလွဲဘူး။ တော်ချက်။
အိုက်ခီလောက် said... | Monday, January 25, 2010 12:16:00 AM
အဟီး ရီလည်းရီ ကြည့်လည်းကြည့်သွားတယ်
ကလေးတွေများနော် အတုမြင် အတတ်သင်ဆိုတဲ့ အတိုင်းပဲ ဟတ်ဟတ် အမား နင့်တူတွေ တူမလေးတွေ သင်ပေးသေးဘူးလား
ဟဟ ကောင်းကောင်းကတတ်ရင် ရုံသွင်းပြီးပြစားလို့ ရတာပေါ့ဟ ဟုတ်ဘူးလား အဟီးးးးးးးးးးးးးးး
ရွှေရတုမှတ်တမ်း said... | Monday, January 25, 2010 5:07:00 AM
ကိုချစ်ဖေ said... | Monday, January 25, 2010 10:07:00 AM
ဘဘဦးသန်းရွှေတို့က အာရှသားအခြင်းခြင်း အားပေးရမယ်တဲ့.မျက်နှာဖြူ ရုပ်ရှင်တွေထဲက ကောင်းတဲ့ အတုယူစရာ ကားလေးတွေကြည့်မိပြီး အနောက်တိုင်းဆန်သွားမှာ စိုးလို့ပါတဲ့..ဗျာ.
သုဒြေ္န said... | Wednesday, January 27, 2010 12:19:00 AM
မကိဒီတခါဆုံဖြစ်ရင် အဲလိုကပြပါလား ရီရတယ်ဗျိုး (အဟိဟိ ဟတ်ဟားဟား) လုပ်ပါတခါတလေလေးများအဲလိုလေး ပျော်စရာအတိဗျာ ကလေးဘ၀များပြောပါတယ် အပြောင်းလဲလေးလဲဖြစ်တာပေါ့မကိရေးတဲ့ တချို့ ပို့ (စ) တွေများဖတ်ပြီးရင် သိပ်ရင်မောရတယ် ဒါမျိုးလေးတော့ဖတ်ချင်ကြည့် ချင်စရာဖြစ်တာပေါ့ နော် ပျော်ရွှင်ပါစေနော်မကိရေ